Taliyihii ciidamada Asluubta Afgooye oo ka mid noqday Saraakiisha lagu dilay weerarkii Afgooye – STAR FM SOMALIA
Taliyihii ciidamada Asluubta Afgooye oo ka mid noqday Saraakiisha lagu dilay weerarkii Afgooye
Taliyihii ciidamada Asluubta Degmada Afgooye ee Gobolka Shabellaha hoose, ayaa ka mid noqday tiro Saraakiil ah oo lagu dilay weerarkii qorsheysnaa ee Ururka Al Shabaab ay ku qaadeen Degmada Afgooye ee Gobolkaasi.
Taliyihii Ciidamada Asluubta ee degmada Afgooye Labo Xiddigle C/qadiir Maskiinow, ayaa la sheegay inuu ku jiray Saraakiisha ciidanka Dowladda ka tirsan ee halkaasi ku dhintay.
C/qaadir ayaa la sheegay inuu ku geeriyooday weerarka Ismiidaaminta ahaa ee biloowgii lagu qaaday Xarunta Ciidanka Birmadka iyo Millateriga ay degan yihiin ee Afgooye.
Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Shabellaha hoose, ayaa xaqiijiyay geerida Sarkaalkaasi ka tirsan Ciidamada Asluubta Somaliya.
Horay waxaa loo xaqiijiyay in loo dilay Maxamuud Daahir Faarax Qooley oo ahaan jiray Agaasimihii Wasaarada Maaliyada ee Maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale waxaa la xaqiijiyay inuu geeriyooday Col.C/qaadir Cabdulle Gorod ahaa Taliye ku xigeenkii Ciidanka Birmadka Booliska.
Khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka iyo qaraxa Ismiidaaminta Shabaabka ka geysteen Degmada Afgooye ayaanan weli si dhab ah loo haynin.
Masuuliyiinta Shabellaha hoose, waxa ay sheegayaan inay ku howlan yihiin sidii ay tira koob sax ah ugu sameyn lahaayen Khasaaraha ka dhashay dagaaladaasi ee rayidka, iyo ciidamada labada dhinac soo kala gaaray.
Xaalada Degmada Afgooye ayaa degan, waxaana si buuxda u maamulaya ciidamada Dowladda Somaliya.